Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-abịakwute anyị na-achọ ihe ngwọta ụfụfụ nkwakọ ngwaahịa. Luckily, anyị ngwaahịa a dịgasị iche iche nke ụfụfụ akara ule, adabara iji chebe ihe ọ bụla ihe. Ma ị nwere ihe ụfọdụ chọrọ nchebe ma ọ bụ chọọ ngwọta nkwakọ ụfụfụ maka usoro ihe niile, anyị nwere ike inyere aka! Guo ka ị hụ otu ọrụ ụfụfụ nkwakọ ngwaahịa anyị ga-esi baara gị uru. Ngosipụta Raymin nwere ikike dị elu na-ebu ibu ma na-enye nchebe kacha mma na ngwa nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụ ọtụtụ ihe ụfụfụ ruru eru ...